Nezvedu - Zhejiang Kaibo Valve Co., Ltd.
Zhejiang Kaibo Valve Co., Ltd. iri locater mune inozivikanwa "China vharafu guta" -Longwan dunhu reZhejiang province.Our kambani yave iri kuita vharuvhu chigadzirwa dhizaini uye kugadzirwa kwemakore mazhinji uye yakaunganidzwa yakapfuma ruzivo mumunda.We isu tatova nekumisikidza mukurumbira wakanaka sevhavha mugadziri uye uve nehunhu hwakanaka pamusika wevhavha.
Kambani yedu inonyatsoshandisa zvimisikidzo, kubatanidza uye maitiro ehurongwa, ine hutano uye inoshanda yehunhu manejimendi sisitimu; zvigadzirwa zvese zvinogadzirwa pasi peNational yakakosha michina yekugadzira michina, iyo inovimbisa kuti chinhu chimwe nechimwe chakavimbika mukushandiswa.
Zhejiang Kaibo Valve Co., LTD zvigadzirwa zvikuru zvinosanganisira maAmerican neRussia akaenzana magedhi mavharuvhu, mavhavha epasi, mavhavha ekuongorora, mavharuvhu ebhora uye mamwe mavhavha mhando, isu tine anopfuura zana zvigadzirwa mitsara uye angangoita 1000 akasiyana mamodeli.Valves anogadzirwa zvinoenderana neAPI , ANSI, GOST zviyero, kukura kubva pa1 / 2 ”kusvika 40” (DN15 kusvika DN1000 mm), kumanikidza kubva pa150lb kusvika 2500lb (1.0Mpa kusvika 42.0Mpa), kushanda tembiricha kubva 196 kusvika 900 kusvika 900. simbi, alloy simbi, simbi isina simbi, Ultra-yakaderera kabhoni simbi isina simbi, alloy 20 uye zvimwe zvinhu zvinosanganisira zvakasarudzika mhando dzesimbi uye alloy yakaitwa zvinoenderana nemutengi yakatarwa zvinodiwa.Zvose zvigadzirwa zvinosangana nezvinodiwa zvemabhizimusi zviyero, mavhavha anokurudzirwa kuti ashandise pamafuta. indasitiri, indasitiri yemakemikari, indasitiri yekuvaka, metallurgia indasitiri, indasitiri yekuchengetedza nzvimbo, magetsi indasitiri, indasitiri yezvikepe, indasitiri yegungwa nezvimwewo Kuti tipe vatengi vedu sarudzo yakanakisa Zhejiang Kaibo Valve Co., LTD yaunza gether boka rakatanhamara rekushambadzira vashandi uye vepamusoro-vanokwanisa mahunyanzvi ehunyanzvi uye mainjiniya.
Iyo misson yekambani yedu ndeyekupa yepamusoro-soro uye yekutanga-kirasi sevhisi kune akasiyana siyana vatengi.We nemwoyo wese tinogamuchira vese vekare uye vatsva vatengi kuti vashanyire kambani yedu, kumisidzana pamwe chete inobatsira pachinangwa chekubatsirana uye kugadzira ramangwana rakajeka pamwechete.
Chitupa chekunyoresa chitupa
Chitupa chakakosha michina (1)
Chitupa chakakosha michina (2)
Chitupa chakakosha michina (3)
Chitupa chakakosha michina (4)